Mooraan Yuuniversitii Haromayaa Goolame.Barattooti Hedduun Nyaata Summaaye Nyaachuu Irraan Miidhaman - Oromia Shall be Free
Diddaa barattooti Yuuniversitii Haromaayaa kaasaniin wal qabatee guyyaa har’aa sirni abbaa hirree mootummaa Wayyaanee baraa gara baraatti barattoota mala adda addaan fixuu aadeffate har’as caalmaatti jabeeffatee itti fufee jira. Haala kanaa har’a 31/1/014 dallaa university Haromayyaa keessatti nyaata barattootaa keessatti summii lubbuu dabarsaa makuun barattootni nyaata kana nyaatan kumaatamni miidhaan guddaa irra gahuun kan mana yaalaa seenan yoo tahu, kanneen maqaan isaanii adda hin baane lakkoofsi isaanii tilmaamaan ja’a tahan lubbuun akka darbee jiruus dhagahamaa jira. Barattootni mana yaalaa galan illee lubbuu darbuu irraa akka hin baraaramne dhagahamaa jira. Kanneen maqaan isaanii adda hin bahiinii fi haala gabaasa kanaa jala jalaan kan gabaafnu tahuu gamanumaa Qeerroon hubachiifna.
Tags haroo maayaa
Previous Amahari Dhugaa akka jirtuuf Aadaa ufii dhukuba Godinoota Hunda keesa facaatee facaaftu uf Saaxilte .
Next Oromoon biyya Toophiya jedhamtu kana keessaatti ilmaan habashotaa waliin ta’ee enyummaa fi mirgii isaa kabajamee jiraachuu ni danda?